နှမျောမိတယ် …မောင်ရယ်🌸🌸🌸 ဆိုပြီး အဝေးကိုယ်‌ငေး ကြည့်နေတဲ့ ပုံလေးတွေချပြလာတဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ ပုံရိပ်များ…. – Shwe Naung
နှမျောမိတယ် …မောင်ရယ်🌸🌸🌸 ဆိုပြီး အဝေးကိုယ်‌ငေး ကြည့်နေတဲ့ ပုံလေးတွေချပြလာတဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ ပုံရိပ်များ….
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီ သဇင်ဦးကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှု မောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ပုရိသတွေ ရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့
အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အတူ လှပ ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူ လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရားတွေနဲ့
ညို့ယူ ဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးကိုဖော်ပြ ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူ တွေများပြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေ ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံလေးထဲမှာ သဇင်ဦး တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုမှု ရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်း နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှမျောမိတယ် ……မောင်ရယ်🌸🌸🌸 သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ် ကြီးလည်း သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ဖတ်ရှုအား‌ ပေးသော ချစ်ပရိသတ်ကြီး လည်း သာယာပျော်ရွှင်‌သော နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုကိုရယ်’ ဆိုပြီး ရေချိုးနေတဲ့ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ မေပန်းချီ
ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ပုံလေးများ….
ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်းနဲ့ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ ဘရာနဲ့ အကြမ်းစားပုံများ……..